अष्ट्रेलियाको व्यस्ततामा समेत खेल्न नभुलेका खेलाडी विनोद भण्डारी,मेलबर्न - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियाको व्यस्ततामा समेत खेल्न नभुलेका खेलाडी विनोद भण्डारी,मेलबर्न
Posted by Himalayan Kangaroo | १२ मंसिर २०७३, आईतवार ०७:११ |
मेलबर्न । विनोद भण्डारी । यो नाम भिक्टोरियन नेपाली क्रिकेट दर्शकहरका लागि अपरिचित नाम होइन । किनभने उनी यहाँको प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लब द हिमालयन क्लबका उम्दा खेलाडी हुन् । भैरहवा,नेपालका विनोदले ९ वर्षको उमेरदेखि नै क्रिकेट खेल्न थालेका हुन् । आम नेपाली युवा जस्तै सुन्दर भविष्यको खोजीमा कङ्गारुको यो देशमा आइपुगेका उनले अध्ययन र कामका लागि होटल र रेष्टुराँ लाइन रोजे पनि खेलप्रतिको मोह त्याग्न सकेनन् । त्यसैले यहाँ पनि उनलाई बेला बेलामा क्रिकेट क्रिजमा ब्याट र बल सहित भेट्टाइन्छन् । उनै विनोदसँग हिमालयन कङ्गारुले छोटो मिठो खेल वार्ता गरेका थियौं । प्रस्तुत छ सोही स्पोर्टस् टल्कको सार :
कहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ ?
हेल्स इन्स्टिच्युसनमा डिप्लोमा इन हस्पिटलिटी म्यानेजमेन्ट एण्ड कमर्सियल कुकरी गर्दैछु ।
कुन खेलसँग संलग्न हुनुहुन्छ ?
म क्रिकेट खेल्छु ।
कहिलेदेखि खेल्न थाल्नुभयो ?
मैले ९ वर्षको उमेरदेखि क्रिकेट खेल्न थालेको हूँ ।
क्रिकेट वाहेक अरु खेलहरु पनि खेल्नुहुन्छ ?
मलाई फुटबल,ब्याडमिन्टन,क्यारामबोर्ड,बास्केट बल र भलिवल पनि मन पर्छ । यी खेलहरु पनि म ठीकै खेल्छु ।
सानो हुँदाको अविस्मरणीय याद छ ?
अँ याद छ । मेरो दाजु वसन्त भण्डारी क्यारामवोर्ड र ब्याड मिन्टनमा स्कूल च्याम्पियन हुनुहुन्थ्यो । साथै उहाँ विजेता क्रिकेट टिमको खेलाडी समेत हुनुहुन्थ्यो ।
खेल क्षेत्रमा लाग्ने प्रेरणा कहाँबाट पाउँनुभयो ?
वास्तवमा मैले दाजुबाटै प्रेरणा पाएको हूँ । उहाँले खेल्नुभएको देखेर म पनि नजानिदो पाराले खेलमा आकर्षित हुँदै गएको थिएँ । पछि म पनि क्रिकेट खेल्न थालें ।
छैन,म अझै सिंगल नै छु ।
घरमा स्पोर्टस् च्यानल हेर्न रिमोट खोसाखोस पर्छ ?
अँ सानो छँदा दिदीहरुसँग पथ्र्यौ । अझ विशेष गरि अर्जेन्टिनाको फुटबल र अष्ट्रेलियाको क्रिकेट म्याच हुँदा खूब झगडै गरिन्थ्यो । म ती दुवै टिमको फ्यान हूँ ।
नेपालमा खेल क्षेत्रको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा स्थीर राजनीति नहुँदा सबै क्षेत्र डामाडोल भएको हो । यदि राजनीतिले एउटा गति समातेर नेपाली खेल क्षेत्रका लागि सरकारले केही लगानी बढाउन सक्यो भने म त राम्रै सम्भावना देख्छु । नेपालमा थुप्रै प्रतिभाहरु जन्मिरहेका छन् । फुटबल र क्रिकेटले पछिल्लो केही वर्ष यता राम्रो नतिजा निकालेर देखाइरहेका छन् ।
तपाईलाई मनपर्ने खेलाडीहरु को को हुन् ?
मलाई क्रिकेटमा एन्ड्रिउ फ्लिन्टो,सनथ जयासूर्या मन पर्छ । फुटबलमा चाहिं मेस्सी मेरो हिरो हो ।
अष्ट्रेलियामा कुन क्लबसँग आवद्ध हुनुहुन्छ ?
म यहाँ द हिमालयन क्लबसँग आवद्द छु । यो खेल र सांस्कृतिक क्षेत्रमा कार्यरत क्लब हो ।
खेल क्षेत्रको सम्झनलायकको कुनै घट्ना ?
जब म १६ वर्षको थिएँ,म भैरहवाको खुकुरी क्लबबाट क्रिकेट खेल्थें । त्यतिखेर मैले क्रिकेट खेल्नका लागि इन्डियामा जाने अवसर पाएको थिएँ । तर पढाइ छुट्छ भनेर स्कूल र घरपरिवारले पठाउँनु भएन ।
खेलाडी हुनुका फाइदाहरु ?
हामी जुनसुकै खेल खेले पनि त्यसले हामीलाई शारीरिक रुपमा स्वस्थ्य र तन्दुरुस्त बनाइराख्छ । साथै हामीमा सकरात्मक सोंचको विकास पनि गर्छ । अरु त आफूले गर्न सक्ने प्रतिभा प्रदर्शन र पाउने प्लेटफर्मले धेरैथोक निर्धारण गर्दछ ।
अष्ट्रेलियाको दैनिकी कस्तो छ ?
अष्ट्रेलियामा धेरै व्यस्त जीवनशैली छ । अझ तपाई कुनै जिम्मेवार तहमा हुनुहुन्छ भने बढी नै व्यस्त रहनुपर्छ । जस्तो म हेड सेफको रुपमा कार्यरत छु,त्यसैले जिम्मेवारी पनि धेरै छन् । आफ्नो लागि समय मिलाउँन धेरै गाह्रो पर्छ । तर जहाँ इच्छा,त्यहाँ उपाय भने जस्तै साथीभाइहरुका लागि भने जसरी पनि समय मिलाइन्छ । समग्रमा प्रवासी जिन्दगी ठीकठाक चल्दैछ ।
प्रस्तुति : गोपाल सुवेदी
Previousसाझा बसमा प्रधानमन्त्री चढ्दछ…
Nextयस कारण सरकारले आइतवार संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सकेन
अष्ट्रेलियामा क्यान्सर पिडित नेपाली युवाको उपचारको लागि सहयोग अपिल
१० जेष्ठ २०७७, शनिबार ०७:२६
५ औँ ओभरमा नेपालको २१ रन, धमला आउट
२८ फाल्गुन २०७३, शनिबार ०६:५५
अष्ट्रेलियाबाट नेपालमा लगानी गर्न श्वेत पत्र तयार पारिने
१९ बैशाख २०७६, बिहीबार ०२:१८